Home Wararka Beyle oo sheegay in dhaqaalihii laga goostay Dowladda Farmaajo
Beyle oo sheegay in dhaqaalihii laga goostay Dowladda Farmaajo
Dowlada Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo wajahday dhaqaale xumi tii ugu darneyd kadib markii wadamada dhaqaalaha siin jirey ay joojiyeen.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in lacagaha lagu kabi jirey miisaaniyada dowlada laga jartay taasina ay ka dhalatay dhaqaalo la’aan.
“Kabkii nala siin jiray waxaa nalaga jaray Agost, Sacuudiga oo lacag noogu deeqayna waxay naga dhamaatay December, Qatar waxa ay nasiisay xoogaa weyna dhammaadeen, marka maanta waxa aan ku soconaa sagxadda” ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya.
Wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Bayle waxa uu ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay isku tashadaan oo ay dowladoodu dhaqaale siiyaan.
Cabdiraxmaan Bayle wasiirka maaliyada ayaa sheegay in Madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha ay ka codsan doonaan shacabka inay dhaqaale ku deeqaan.
Dhaqaale la’aanta ay dowlada federalka ay ku dhawaaqday ayaa ku soo beegmaysa xilli wargeys ka soo baxa dalka Maraykanka uu shaaciyay in lacag dhan 150,000 oo dollar uu Madaxweynaha xilligu ka dhamaaday ku bixyay shirkad u ololeyn doonta sidii uu booqasho ugu tegi lahaa dalka Maraykanka.